November 3, 2020 - Online Hartha
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပြီး၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည် မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား၊ နေပြည်တော်တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်….. မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ ။ လှိုင်းအနည်းငယ်မှ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၄)ပေမှ (၇)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည် နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် … Read more
ဒီ(၁၆)ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘဝ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ …
သသေညျ့ တိုငျအောငျ (သှားခိုငျ) တဲ့ဆေးနညျး….
သေသည့် တိုင်အောင် (သွားခိုင်) တဲ့ဆေးနည်း. အသက်ကြီးလာရင် (သွား)နာတာ သွား(နဲ့ )တာဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။နောက်တော့(သွား)ကကျိုးတော့တာပါဘဲ ကျိုးပီးရင်ပြန်မပေါက် တော့ပါ (သွား)ကျိုးရင်မိမိစားတဲ့ အစာကျေညှက်စွာမဝါးနိုင်ခြင်းကြောင့်အဟာရဖြစ်ထွန်းမှု နည်းတော့တာပါ။အသက်ကြီးလာတာနဲ့ မိမိ၏(သွား) မကျိုးရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်ရန်စေတနာရှေ့ထား၍ငွေမကုန်တဲ့ဆေးနည်းလေးကိုမျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မသိရင်ရွှေတစ်ဆုပ်လောက်တန်ဘိုး ရှိသလို သိရင်ဖွဲတစ်ဆုပ်လောက်) တန်ဘိုးမရှိသော်လည်း ဒီဆေးနည်းလးကို သုံးစွဲသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ(သွား)မကျိုးသွားခိုင်တာကိုတွေ့ မြင်ရ၍ ဒီဆေးနည်းမျှဝေခြင်းအားဖြင့်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဆေးနည်း ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ၁။ကုက္ကိုခေါက်(တောကုက္ကို) ၂။တမာခေါက် ၃။ထနောင်းခေါက် အခေါက်သုံးမျိုးကို ဆတူရေနှင့်သုံးခွက်တစ်တင်ပြုပ်ပါ ပြုပ်ရေကို မနက်မျက်နှာမသစ်ခင် ၁၅မိနစ်ခန့်ငုံထားပါ ပြီးမှမျက်နှာသစ်ပါသုံးရက်ဆက်တိုက်ပုံမှန်ပြုလုပ်ရင် (နဲ့)နေတဲ့(သွား)ပြန်ခိုင်ပါတယ်။အသားငါးစားရင် သွားနာပြီးပြန်( နဲ့) လာတတ်ပါတယ် ၎င်းပြုပ်ရေကို ထပ်ငုံပါ သေသည့်တိုင်အောင်(သွား)မကျိုးတော့ပါ။ (အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ) Unicode Version သသေညျ့ တိုငျအောငျ (သှားခိုငျ) တဲ့ဆေးနညျး. … Read more
အအေးလှိုင်းများ လာတော့မည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဆောင်းရာသီကာလ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် လာနီညာ အခြေအနေသတင်း (က) အီကွေတာအနီးရှိ အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ (Tropical Pacific Ocean)၏ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အပူချိန်နှင့် လေထုဖြစ်စဉ်များအရအားနည်းသော လာနီညာ အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါသည် ။နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသဌာနများ၏ သင်္ချာပုံစံပြုမော်ဒယ်များ ခန့်မှန်းချက်အရလာမည့်နိုဝင်ဘာလ-ဒီဇင်ဘာလများတွင် အားအသင့်အတင့်မှ အား ကောင်းသော လာနီညာအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ (ခ) လာနီညာဖြစ်စဉ်သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ လာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာယေဘုယျအားဖြင့် ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း၊ ဆောင်းရာသီကာလ အရှေ့မြောက်မုတ်သုံလေအားကောင်းမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ညအပူချိန်များ လျော့နည်းခြင်း၊အအေးပိုခြင်း၊ အရှေ့ဘက်မှ လေပွေလှိုင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်း၊ အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်း မှုဖြစ်စဉ်များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစသည့် ရာသီဉတု ဖြစ်စဉ်များ … Read more
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ဘုရားလာဖူးတဲ့”ဖား” လေးပါ…(ရုပ်သံ) တကယ်ကို အံ့သြဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်…။ အများသူငါမြင်ဖူးအောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…။ အားလုံးလဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပြီး “ဖား” လေးဘဝကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်အောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…။ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ သရ ဏဂုံ သုံးပါး ကို အမြဲမပျက် ရွတ်ဆိုပွား များသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့ ရရှိနိုင်သော အကျိုး တရားများ မိမိ ၏ အဆွေ ခင်ပွန်း များကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင် မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် … အလွန်အလုပ်များ၍ တရား အားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသော သူများသည် သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက် … Read more